အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ သူမရဲ့ပရိတ်တွေကို ရင်ခုန်အောင်လုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး – Ever Best
အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ သူမရဲ့ပရိတ်တွေကို ရင်ခုန်အောင်လုပ်လိုက်ပြန်တဲ့ မိုးမြင့်သဇင်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
မိုးမြင့်သဇင် ဟာ ခေါင်မိုး ထပ်မှာ ဘောင်းဘီ အတိုလေးနဲ့ မိမိုက် နေအောင် ပိုစ့်ပေး ဓါတ်ဖမ်း နေတာ ဖြစ်လို့ ပုရိသတွေ ရင် ကို လှုပ်ခတ် သွားမိမှာ အသေ အချာပဲမို့ ချစ်ပရိသတ် တွေ ကြည့်ရှု စေနိုင်ရန် အတွက် ပြန် လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ် နော် … . ။ ကဲ…. ပရိသတ် တွေကလည်း မော်ဒယ်လ် မိုးမြင့်သဇင် ရဲ့ ပုံလေး တွေကို ကြည့် ပြီး အသည်းလေးတွေ ပေးခဲ့ဖို့ မမေ့ လိုက်ပါနဲ့နော် … . ။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်း မယ့် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေကိုလည်း ပရိသတ် တွေက အားပေး ကြမယ်မလား … . ။
ပုရိသ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်း စွဲ မော်ဒယ်တစ်ဦး ဖြစ် တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် ကို မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုလောက်အောင် သိကြမယ်ထင်ပါတယ် နော်။ သူမရဲ့ ချစ် စရာကောင်း တဲ့ အပြုံး ချိုချိုလေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေက ပုရိသတွေ ကို ဆွဲဆောင် နေတဲ့ ထူးခြားမှု တွေ ဆိုရင်လည်း မှားမယ် မထင်ပါဘူး ။ သူမ ရဲ့ ဆက်စီ ကျကျ အမိုက်စား ပုံ လေး တွေ ဟာ ဆိုရင် လည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ် တွင် ရေပန်းစား လူကြိုက်များ တာလည်းတွေ့ရ ပါတယ် … . ။
ယခု လက်ရှိမှာတော့ သူမက အနု ပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နေတာဖြစ်ပြီး photo shooting အမိုက်စားလေးတွေကို လက် ခံရိုက်ကူးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် အောင်ြ မင်ပြီး ပရိသတ်ချစ်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေ တာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုဖက်ရှင်လေးတွေပဲ ဝတ်ဝတ် တစ်နေ့ တစ်ခြား ပိုပြီး ထူး ခြား လှပ လာ တဲ့ မိုးမြင့်သဇင် က တော့ အခု လက်ရှိ မှာလည်း အမိုက်စား ပုံလေး တွေနဲ့ ခြွေချ လိုက်ပြန်ပါပြီ နော် … . ။
source & photo credit : Moe Myint Thazin ’ s facebook account
မိုးျမင့္သဇင္ ဟာ ေခါင္မိုး ထပ္မွာ ေဘာင္းဘီ အတိုေလးနဲ႔ မိမိုက္ ေနေအာင္ ပိုစ့္ေပး ဓါတ္ဖမ္း ေနတာ ျဖစ္လို႔ ပုရိသေတြ ရင္ ကို လႈပ္ခတ္ သြားမိမွာ အေသ အခ်ာပဲမို႔ ခ်စ္ပရိသတ္ ေတြ ၾကည့္ရႈ ေစနိုင္ရန္ အတြက္ ျပန္ လည္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္ ေနာ္ … . ။ ကဲ…. ပရိသတ္ ေတြကလည္း ေမာ္ဒယ္လ္ မိုးျမင့္သဇင္ ရဲ့ ပုံေလး ေတြကို ၾကည့္ ၿပီး အသည္းေလးေတြ ေပးခဲ့ဖို႔ မေမ့ လိုက္ပါနဲ႔ေနာ္ … . ။ ဒါ့အျပင္ သူမရဲ့ ဆက္လက္ ေလၽွာက္လွမ္း မယ့္ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြကိုလည္း ပရိသတ္ ေတြက အားေပး ၾကမယ္မလား … . ။
ပုရိသ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အသည္း စြဲ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦး ျဖစ္ တဲ့ မိုးျမင့္သဇင္ ကို မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေလာက္ေအာင္ သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ ေနာ္။ သူမရဲ့ ခ်စ္ စရာေကာင္း တဲ့ အျပဳံး ခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္း အလွေတြက ပုရိသေတြ ကို ဆြဲေဆာင္ ေနတဲ့ ထူးျခားမႈ ေတြ ဆိုရင္လည္း မွားမယ္ မထင္ပါဘူး ။ သူမ ရဲ့ ဆက္စီ က်က် အမိုက္စား ပုံ ေလး ေတြ ဟာ ဆိုရင္ လည္း ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာေပၚ တြင္ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ား တာလည္းေတြ႕ရ ပါတယ္ … . ။
ယခု လက္ရွိမွာေတာ့ သူမက အႏု ပညာ အလုပ္ေတြကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ေနတာျဖစ္ၿပီး photo shooting အမိုက္စားေလးေတြကို လက္ ခံရိုက္ကူးေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္ ေအာင္ျ မင္ၿပီး ပရိသတ္ခ်စ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားေန တာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္လိုဖက္ရွင္ေလးေတြပဲ ဝတ္ဝတ္ တစ္ေန႔ တစ္ျခား ပိုၿပီး ထူး ျခား လွပ လာ တဲ့ မိုးျမင့္သဇင္ က ေတာ့ အခု လက္ရွိ မွာလည္း အမိုက္စား ပုံေလး ေတြနဲ႔ ေႁခြခ် လိုက္ျပန္ပါၿပီ ေနာ္ … . ။
ဆက်ဆီ ကျလွန်းချက်က လိုက်လို့မမီပါလား မမသင်ဇာ ရယ် (ဗီဒီယို)
အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ ထိန်းချုပ်မရတော့လောက်အောင် ညို့ငင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ သွန်းဆက်
ဖြူဖွေးဝင်းဥပြီး တင်းရင်းနေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို အမိုက်စား လှုပ်ခါပြီး ပုရိသတွေကို ညို့ယူဖမ်းစားလိုက်တဲ့ Mဆိုင်းလုရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို
နေစရာမရှိလို့ ရေမြောင်းအောက်မှာနေတဲ့ မိသားစုလေးကို နေထိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးတဲ့အပြင် အလှုငွေပါ လှူပေးခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင် ( ရုပ်သံ) )